धन कमाउन मलेशिया गएका नेपालीको १८ वटा श’वहरुले विमानस्थलमा रुवाबासी ! – NepalajaMedia
धन कमाउन मलेशिया गएका नेपालीको १८ वटा श’वहरुले विमानस्थलमा रुवाबासी !
January 23, 2021 290
आएका शवहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क घर वा आफन्तले सद्गत गर्ने स्थानसम्म पुर्‍याउनेछ । केही परिवारले शव ढुवानीका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् भने केही परिवार काठमाडौं आउन बाँकी छ । फोटो तथा समाचार अनलाईन खबरबाट साभार गरिएको हो।
Prevयस्ता रोगीले अदुवा नखानुहोस् ‘बिष’ सरह हुन्छ !
Nextडल्ले खुर्सानी खानुको फाइदाहरु